जलवायु सम्मेलनले मानवीय संकट समाधानको जवाफ देला ? :: NepalPlus
जलवायु सम्मेलनले मानवीय संकट समाधानको जवाफ देला ?
इमोजेन फुल्केस२०७८ कार्तिक १६ गते २३:५१
मैले यो लेख्दा, स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र संघको कोप २६ जलवायु वार्ता सुरु भएको छ । सम्मेलनको अगाडि, विश्व नेताहरूले कार्बन डाईअक्साईड उत्सर्जन कम गर्न, सामुहिक रुपमा हुने बसाई सराई कम गर्न, पानीको संकट र द्वन्द घटाउने आदि सबै जलवायु परिवर्तनसित संवन्धित छन् ।
यो जलवायु विश्व सम्मेलन आयोजक देशका तर्फबाट बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र अन्य विकशित राष्ट्रका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भिर चेतावनीहरु जारि गरेका त छन् । तर उनीहरुले अनुभूतिमा ढिलो गरेको देखिन्छ र यसलाई संवोधन गर्नपनि चेतावानी जारि गरेजस्तै दत्तचित्त भएको देखिन्न ।
मानविय सहायता एजेन्सीहरूले केही समयदेखि जलवायु परिवर्तनका मानवीय परिणामहरूको सामना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जलवायुसँग सम्बन्धित खडेरीले थप भोकमरी र अत्यधिक वर्षाले मलेरियाको संक्रमण बढाएको देखिरहेका छन् ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) का जलवायु तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमका प्रमुख गेर्नोट लागन्डा भन्छन् “जलवायु परिवर्तन लामो समयदेखि मानवीय समस्या बनेको छ । नयाँ शताब्दी शुरु भएदेखिनै भोकमरी पहिलेको कुनैपनि बिन्दु भन्दा छिटो बढ्दै छ ।”
हामीले उत्सर्जनका लागि मुख्य दोषी भएका राज्यहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ- मुख्य दोषी देशहरुले बनाएको क्षतीको मूल्य कसैले तिर्नुपर्नेछ । तिनीहरूलाई सधैं सबैभन्दा कमजोरनै मर्कामा पर्ने, सबैभन्दा कमजोरनै पिडित बनिरहने, दोषी देशहरुले गरेको उत्सर्जनको लागि भुक्तानी जारी राखिरहने गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाउनु जरुरि छ ।
विश्वका दुई ठूला सहायता एजेन्सीहरूमा जलवायु परिवर्तनका लागि समर्पित वरिष्ठ अधिकारीहरू रहेको तथ्यले जलवायु संकटलाई मानवतावादीहरूले कति गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन् भन्ने सङ्केत गर्छ ।
“विश्वका ९० प्रतिशत शरणार्थीहरू जलवायु आपतकालको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरूबाट आएका हुन्” हार्परले औंल्याए । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको ८० प्रतिशत मुट्ठीभर आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूबाट हुन्छ । तिमध्ये धेरै जसो उत्सर्जन अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया, टर्की, जापान जस्ता देशले गरिरहेका छन् ।
यदि विश्व नेताहरूले हेर्ने ख्याल राख्छन् भने ग्रहका सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रहरूको नतिजा पहिले नै स्पष्ठसित देखिएकै छ । अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा १ दशमलव ५ गुणा छिटो बढिरहेको छ । तीव्र लामो खडेरीले दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने सबैलाई थाह छ ।
यमनमा, संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय संकटको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । यस वर्षको ठूलो बाढीले झन दुःख थपिदिएको छ । अफगानिस्तानमा खडेरीले बानीनाली बर्बादै पारेको छ । कुपोषणको स्तर बढेको छ । त्यहाँ पहिले नै कुपोषण र अनिकालको अवस्था उच्च थियो ।
एन्ड्रयू हार्परले भनेका छन्- जलवायु परिवर्तनले नराम्रो संकटलाई झन् झन् नराम्रो बनाउँछ । कुनैपनि अस्तित्वमा नभएको संकट सिर्जना गर्न बल पुर्‍याउँछ । जलवायुले गरिबी, कुपोषण र अनिकालमा परेका कमजोर जनसंख्याका लागि अझ बढी निराश बनाउनेछ । यसले नाजुकता, हिंसा, द्वन्द्व र त्यसपछिको विस्थापनलाई बढाइरहेको छ ।
“विश्वका ९० प्रतिशत शरणार्थीहरू जलवायु आपतकालको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरूबाट आएका हुन्” हार्परले औंल्याए । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको ८० प्रतिशत मुट्ठीभर आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूबाट हुन्छ ।
“हामी सामूहिक रूपमा एउटा चट्टानतिर चलिरहेका छौं” गेर्नोट लागन्डा थप्छन् “धेरै मानिसहरूले पहिले नै दुई वा तीन डिग्री थप ताप भएका देशहरूमा चट्टानको फेदमा आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् ।”
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण
त्यसैले कोप २६ सुरु हुनुभन्दा महिनौं र वर्षौं अघि सहायता एजेन्सीहरूले ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण’ परियोजनाहरू सुरु गरेका थिए ।
तिनीहरूले कमजोर जनसंख्यालाई थप जलवायु-उत्थानशील बालीहरूमा स्विच गर्न समर्थन गर्दै आएका छन् । अर्थात् जलवायु परिवर्तनसँगै वालीनाली उत्पादनलाईपनि त्यसै अनुरुप ढाल्न सहयोग गर्दै आएका छन् । एन्ड्रयू हार्परले औंल्याए “भविष्यमा विश्वका सम्पूर्ण भागहरूमा खाद्य सुरक्षाको लागि ठूलो चुनौती देखिने सम्भावना छ। धेरै क्षेत्रहरूमा हालका बालीहरू अब बाँच्ने छैनन् ।”
अनिकालको लागि पर्खनु, आफू र आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउन सक्ने ठाउँमा भाग्न सक्ने बलिया व्यक्तिहरू बसाई सर्ने सहायता एजेन्सीहरू महसुस गर्छन् । धेरै थोरै वा ढिलो वा छिट्टै भन्ने मात्रै प्रश्न् हो । जनसङ्ख्या बढ्नाले असुरक्षा र स्रोतसाधनमाथि झन दबाब थप्ने छ।
मानवीयवादीहरूले पनि प्रकोप तयारीमा थप लगानी गरिरहेका छन् । टाइफुन- र बाढीयोग्य वा बाढी जानसक्ने क्षेत्रहरूमा समुदायहरूलाई जलवायु जोखिमहरूसँग अझ सुरक्षित रूपमा बाँच्न सहयोग गर्दैछन् ।
त्यस्ता आवश्यकताहरू छन् जुन केही विज्ञहरूले सहायता एजेन्सीहरू त्यस्तो काम गर्न ‘युद्ध मानवतावादबाट टाढा जलवायु मानवतावादतिर जानुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन् ।
भविष्यमा विश्वका सम्पूर्ण भागहरूमा खाद्य सुरक्षाको लागि ठूलो चुनौती देखिने सम्भावना छ। धेरै क्षेत्रहरूमा हालका बालीहरू अब बाँच्ने छैनन् ।
तर, केही द्वन्द्वहरू जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । युद्धहरू अन्य कारणले पनि सुरु हुन्छन् । यद्यपि सहायता एजेन्सीहरूले उनीहरूको सीमित स्रोतहरू लगानी गर्छन् । तिनीहरूको कोषले वास्तविक आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन ।
गेर्नोट लागन्डाले हामीलाई सम्झाए “आज पनि हामी यहाँ आवश्यक सबै मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम छैनौं । हाल विश्वमा ८१ करोड १० लाख मानिसहरू भोकमरीबाट पीडित छन् । तर अहिले लगभग १२ करोड मानिसलाई मात्रै खाद्य सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ ।”
जलवायु सम्मेलनले मानवीय जवाफ देला ?
बोरिस जोनसन र उनका सहयात्री विश्व नेताहरूले सामूहिक प्रवास र द्वन्द्वको चेतावनी दिएका छन्, त्योपनि पटकपटक । के उनीहरू वास्तवमै धेरै मानिसहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको खतरा ज्यादै ठूलो छ, मानव अस्तित्वका लागि खतरा छ भनेर सचेत छन् ? उनीहरुले दाबी गर्दै आए जस्तो मानव हित, मानव अस्तित्वको लागि जलवायु परिवर्तन मध्यरात हुनु एक मिनेट अगाडिको अवस्थामा आईपुगेको छ, त्यस महत्वपूर्ण कार्यलाई अब ढिलाई गर्नुहुन्न भन्ने बुझेर काम गर्छन् त ?
दुर्भाग्यवश, संकेतहरू शुभ देखिएका छैनन् । धेरै देशहरूले सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलनमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
आज पनि हामी यहाँ आवश्यक सबै मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम छैनौं । हाल विश्वमा ८१ करोड १० लाख मानिसहरू भोकमरीबाट पीडित छन् । तर अहिले लगभग १२ करोड मानिसलाई मात्रै खाद्य सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ ।
हालसालै इन्धनको मूल्य बढ्यो । कतै ईन्धन करका नाममा मूल्य बढ्यो । त्यो बढाउँदा त्यसका विरुद्धको प्रतिरोध मतदाताहरूमा स्पष्ट रूपमा यति ठूलो देखिएको छ कि धेरै राजनीतिज्ञहरू त्यस्ता नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्न लज्जित छन् । वा यस वर्ष स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, अ मेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकमा भएको जस्तै राजनीतिज्ञहरूले कार्बनडाईअक्साईड कम गर्ने उपायहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरे । तर मतपेटिकामा पराजित भए ।
स्विजरल्याण्डले कार्बनडाई अक्साईडको बारेमा कानून पारित नगरेको तथ्यले जलवायु परिवर्तनका जिम्मेवार र अबुझ्न मानिसहरु विकसित देशहरूका हुन् जसलाई विश्वस्त पार्न धेरै गाह्रो भएको संकेत गर्दछ ।
त्यसोभए के कोप २६ बाट मानवतावादीहरूले आशा गरेको एउटा परिणाम निस्कन्छ ? एन्ड्रयू हार्परले उत्सर्जनको बारेमा दिईने तथ्याङ्कमा मात्र नभई कसले कहिले कति घटाउँछ त्यो महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । तथ्यांकमा भन्दा मानिसहरूको हितलाई अगाडि र केन्द्रमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । संसारमा सबैभन्दा कमजोर परिस्थितिमा मानिसहरू छन् जो अझै बढी कमजोर बन्न गइरहेका छन् ।
“हामीले उत्सर्जनका लागि मुख्य दोषी भएका राज्यहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ- उनीहरूले पृथ्वीलाई अति दोहोन गर्ने तरिका घटाउन, आफूलाई आवस्यक वा पुग्ने तरिका मात्रै अपनाउनेगरि परिवर्तन नगरेसम्म जलवायु परिवर्तनका गम्भिर नतिजाहरू भैरहने छन् । मुख्य दोषी देशहरुले बनाएको क्षतीको मूल्य कसैले तिर्नुपर्नेछ । तिनीहरूलाई सधैं सबैभन्दा कमजोरनै मर्कामा पर्ने, सबैभन्दा कमजोरनै पिडित बनिरहने, दोषी देशहरुले गरेको उत्सर्जनको लागि भुक्तानी जारी राखिरहने गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाउनु जरुरि छ ।